> Resource > Windows > Sida loo Split Videos in Windows Live Kan sameeyey Movie
Haddii aad qabto video ah oo ay doonayaan oo kaliya si aad u hesho qayb ka mid ah, waxa aad samayn doonaa? Waa hagaag, waxaad u baahan tahay si ay u dhinto ama kala qaybsan badan videos in qayb ka mid ah oo aad jeceshahay aad u hesho. Waxaa jira software badan video tafatirka kaa caawin karaa inaad u samayn oo halkan waxaan kuu sheegi doonaan sida ay u kala jabeen video in Windows Live Kan sameeyey Movie si fudud oo degdeg ah si aad u qoyska iyo saaxiibada wadaagi kartaa video ugu jeclaa on YouTube.
Ka hor inta aanad bilaabin, fadlan hubi in aad gaare ku rakibtay Windows Live Movie abuuray. Haddii aan, waxaad ka ay si rasmi ah kala soo bixi kartaa. Fur aad Windows Live Movie Kan sameeyey oo raac tilmaan-hoose si ay u isticmaalaan kala Kan sameeyey Windows Live Movie hawlaha si ay u dhinto aad files video waaweyn.
Sida loo kala qaybsan tahay files video waaweyn ee Windows Live Kan sameeyey Movie
Tallaabada 2. videos Split in Windows Live Kan sameeyey Movie
Waxaa jira laba siyaabood oo loo user Windows Live function kala Kan sameeyey Movie: 1. Dooro dhibic video meesha aad rabto in aan kala tagno ah, xaq-riix video clip ah, oo guji "kala". 2. Dooro dhibic video aad kala qaybin doonaa ka. Under "Video Tools", riix "Edit" tag, ka dibna riix "kala" button.
Ka dib markii in, aad video loo kala qeybin doonaa qaybaha oo kala duwan. Oo waa inaad edit karaa gooni ah videos sida aad jeceshahay iyo jiididda iyo hoos u guuraan goobta.
Tallaabada 3. Save iyo wadaagno videos
Riix icon ee bidix ee sare, ka dibna dooran Save movie. Waxaa jira afar wax soo saarka video tayada si ay u doortaan. Marka aad meel aad dulqabo mouse on doorasho kasta, waxaad arki karo wax soo saarka video bandhigay baaxadda, muuqa, iwm Waxa kale oo aad gubi kartid videos ay u DVD adigoo gujinaya Guba DVD wax ka dooro folder caga si uu u badbaadiyo file video ah.
Haddii aad rabto inaad la wadaagto aad video on YouTube leh dad badan, waxaad riixi kartaa naadiya movie iyo dooran naadiya on YouTube, geli macluumaadkaaga account YouTube oo si toos ah u wadaagno video shaqada.
Wixii gaare filim awood badan in aan kala tagno videos, waxaad isku dayi kartaa version maxkamad free of Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor) , kaas oo kaa caawin kara inaad kala tagno, jar, dalagga, isku shaandheyn iyo dhajisan videos si xor ah oo si habsami leh. Raadi version aad ka jeeclaadeen Windows ama Mac hoos ku qoran.